Archive du 20171222
Hery Rajaonarimampianina Mikiry hanova lalàmpanorenana
Manomboka ny « kapa ranjo » mivantana ho an’ireo kandidà sasany amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy, amin’ny antsojay ataon’ny mpitondra ankehitriny.
Fanatsarana ny lalàm-pifidianana Mitohy ny fitakian’ny fiarahamonim-pirenena
Nanatanteraka fikaonan-doha tetsy amin’ny Centre Arrupe Faravohitra ireo fiarahamonim-pirenena sy solontena avy amina antoko politika ho fanohizana fitakiana fanatsarana ny lalàna mikasika ny fifidianana,
Fidinana an-dalambe Niaiky ny DFP fa tsy nahomby
Tao Toamasina ny “Dingana ho an’ny Fampandrosoam-Pirenena (DFP)” nasionaly tarihin’Atoa Ratolojanahary Mahavarona na Doudou.
Rivo Rakotovao Manome fotoana afaka 11 volana
Nanatanteraka kongresy kely tao Antsirabe omaly alakamisy 21 desambra 2017 ny antoko HVM. Nitarika izany tao amin’ny Tranompokonolona ny filoha nasionaly, Rivo Rakotovao,
Fifidianana 2018 Maro sahady no miahiahy hala-bato
Miteraka ahiahy ho an’ny mpanara-baovao ny tsy nahavitan’ny Antenimiera roa tonta nandinika ny lalàm-pifidianana nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa farany teo, ary azo antoka fa hisy indray ny fivoriana tsy ara-potoana handinihina izany.
KMF/CNOE Mikatsaka izay hampavitrika ny mpifidy
Raikitra omaly tetsy amin’ny Falda Antanimena ny andiany voalohany amin’ny fikaonandoha tontosain’ny komity mpanara-maso ny fiainam-pirenena na KMF/CNOE mba hijerena izay fomba mahomby entina hanabeazana ireo olom-pirenena
Ho fôsika daholo
Miarahaba indray ry Jean a ! Izany ho aho no tsy hampandroso ity firenentsika ity dia io misandotsandokareo io ihany ! Mihevitra ny tsy ho tratry ny aloka mihitsy moa ianareo io ?
Tantsahan’i Vakinankaratra Notambazana zezika
Anisan'ireo Distrika voa mafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza « Enawo” ny Distrikan'Ambatolampy.
Andohan’Ilakaka Nanofana momba ny fiahiana ara-tsosialy ny CNaPS
Kaominina vaovao Andohanilakaka, ao anatin’ny distrikan’Ihosy faritra Ihorombe no misy azy. Ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany no anton’asan’ny ankabeazan’ny mponina. Mbola maro anefa ny mpiasa no tsy mahafantatra ireo tombontsoa tokony horaisiny eo anivon’ny Tahirim-pirenena momba ny Fiahiana ara-tsosialy.
Tsiazotafo - Antananarivo Renivohitra Trano tsy ara-dalàna nakaton’ny kaominina
Nitondrana fanazavana momba ilay fanalana ny olona mipetraka ao amin’ny trano iray etsy Tsiazotafo nataon’ny vadintany ny zoma 9 sy 15 desambra 2017 lasa teo ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Tsipy kanetibe Tsy manana kianja intsony Antsirabe
Hiditra amin’ny “Grande Finale” ankehitirny ny hetsika karakarain’ny PIF na ny “Pétanque Inter-fokontany” ao Antsirabe ny 23-24 desambra 2017 izao.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Ireo sangany tamin’ity taona 2017 ity
Hiavaka kely ny pejin’ny kintan’ny fanatanjahantena Malagasy anio zoma 22 desambra 2017 satria dia ireo sangany nandrombaka medaly sy amboara erantany sy aty amin’ny kaontinanta afrikanina no hasehontsika an-tsary etoana.
Ho very amin’ny … hery
Raha misy ny atao hoe : “hazo amoron-tevana”, isika Malagasy indray dia efa eny amin’ny sisin’ny hantsana. Ny foto-tsakafo andavanandro mihitsy no ataon’olom-bitsy kilalao sy fihinina mba hampiakatra hatrany ny vidiny. Izao dia efa mananika ny 3.000 Ariary ny kilao ary misy aza maminavina fa raha izao no mitohy dia mety hiakatra 4.000 Ariary atsy ho atsy.
Fifamoivoizana Hifampitaiza ireo mpitondra scooter
Tonga tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely ireo tanora maro mpitaingina moto ny marainan’ny alakamisy 21 desambra 2017 ho fanohizana ny hetsika notanterahan’ny Boriborintany faha-6.
Amborovy - Mahajanga Mitily homamiadan'ny nono sy vozon'ny tranonjaza
Hampiantrano ny hetsika faradoboka amin'ny fitiliana maimaimpoana homamiadan'ny nono sy vozon'ny tranonjaza ny fokontanin'Amborovy ao Mahajanga anio.
Harena ankibon’ny tany sy solika Nampidi-bola be amin’ny kitapombolam-panjakana
Nizara kilalao ho an’ny zanaky ny mpiasa sy fanomezana ho an’ny mpiasa mba hahafahany mifety any an-tokantranony avy, isaky ny fotoanan’ny krismasy sy ny faran’ny taona tahaka izao, omaly,
Sekoly ambony INSPNMAD Hanangana oniversite manara-penitra
Fotoan-dehibe ho an’ny sekoly ambony INSPNMAD io taona vaovao 2018 ho avy io. Hiakatra amin’ny sehatra ambonimbony kokoa ny sekoly entina hanatsarana ny sehatry ny fanabeazana.
Tabera Randriamanantsoa Miantso ny Bianco hanadihady ny INFA
Nivoaka ny alarobia teo ny valim-panadinana ho an’ny fifaninanana hidirana ho mpianatra eo anivon’ny INFA na ny sekoly nasionaly momba ny asam-panjakana.